शिशिर भण्डारीलाई अचानक यस्तो के भयो ? हात जोड्दै सबैसँग सहयोग माग्दै आए (हेर्नुस् भिडियो) – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/शिशिर भण्डारीलाई अचानक यस्तो के भयो ? हात जोड्दै सबैसँग सहयोग माग्दै आए (हेर्नुस् भिडियो)
बुवा दृष्टिबिहिन थिए भने आमा सकुशल देखिन्थिन् । सानो बाबुको गीत सुनेर समय समयमा हेर्नेहरुले १०, २० रुपैंया बाबुको अगाडी रहेको एउटा भाडोमा खसालिदिन्थे । निकै मिठो स्वर भएका यि बाबुको नाम हो, बसन्त लामा ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
बसन्तले यसरी गीत गाउन थालेको केहि मिहना मात्र भएछ । उनको बुवा बुद्ध लामा र आमा युनिका लामासंग कुरा गर्दा थाहा भयो, आफ्नै स्कुलको फि तिर्न पैसा नभएपछि बाबुले सडकमा गाउन थालेका रहेछन् । यो परिवारको कथाले सबैको मन जित्यो र शिशिरले यो परिवारको गीत रेकर्ड गरिदिए र भिडियोको साथमा ल्याए ।
रचना रिमाल र कुमार अभिको पनि आवाज रहेको गीत यतिबेला चर्चामा छन् । गीतले सबैलाई रुवाएको छ । तर बुष्ट गरेर गीतको भ्युज बढाउने जमानामा शिशिको यो गीत ट्रेण्डिंगमा पनि आएको छैन । राम्रो भ्युज पाएपनि गीत ट्रेडिंगमा नआउँदा शिशिर दुखी छन् । शिशिरले सबैलाई सहयोग अपिल गरेका छन् । भिडियो हेर्नुस
बेहुलीले बिदाईको बेला गरिन् यस्तो हर्कत, जन्तीनै छक्क, हेरौ केही रमाइलो (भिडियो सहित)